About isu - Qingdao Evergrowing Yaiba Co., Ltd
Evergrowing ndiko aitungamirira nokutengesa zvinoyangarara mumakeji hove kuti hove kurima mu kure negungwa uye pemvura zhinji. Tiri vakazvitsaurira kugadzira uye kupa yepamusoro hove mumakeji vakagutsa nezvaunoda uye mamiriro nemakanzuru.
Overfishing chakaguma chinokosha Kuparadzwa dzomusango mumatanda hove. Fish keji kurima iripo sechinhu zvakatipoteredza inogona kuenderera dambudziko iri. Evergrowing rave kushanda pamusoro pokumuka, gadzira uye rokutengesa pakubhadhara akasiyana zvinoyangarara mumakeji hove. Zvizarira isu achakupaiwo achapiwa yakadekara yako chaiyo zvinodiwa. Range yedu inosanganisira duku dzakabatana yakanaka yokutsvakurudza basa kana furaya kugadzirwa zvakanaka kuti hofori dzeraundi mumakeji HDPE hove inokwanisa kushanda Oceanic ezvinhu.
The kambani kuenzana uye anoramba ari vachiwana kukura mune hove mumakeji kugoverwa.
Wedzera kuvapo pamisika uye kiinura mamwe musika potentials yose.
Mumakore okukura, takavaka pedyo pamwe ukama China Ocean University, Fisheries Institute uye ruzivo aquaculture masayendisiti munyika yose. Tiri nokutengesa mhinduro uye mabasa kuitira kuvandudza profitability wako.
Evergrowing yenyu yakanaka mudiwa kuva hove keji kurima chirongwa.
Chinzvimbo uye kwenguva refu, Zvichienderana uye RUBATSIRO RUNOTARISA
Kupa yakanaka midziyo kuponesa mari uye kuvandudza kugadzirwa
Foster ane zvakatipoteredza uye mukudyidzana nezvimwe zvisikwa basa mabhizimisi